မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မတ်လ ၂၀၁၈ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မတ်လ ၂၀၁၈
မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မတ်လ ၂၀၁၈
Posted by kai on Mar 2, 2018 in Editor's Notes, Myanmar Gazette |4comments
အမေရိကပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာတွင် စစ်အင်အားအကြီးဆုံး စူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အစိုးရတွင်မဆိုထားနှင့် သန်း၃၂၀လူထုအတွင်း၌ပင် သေနတ်အလက်ပေါင်းသန်း၃၀၀ကျော်ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်ဟု စစ်တမ်းများကပြဆိုပေရာ
နိုင်ငံတည်ထောင်သူဖခင်ကြီးများသည် လူတိုင်းသေနတ်လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို အခြေခံဥပဒေထဲထည့်၍ အကာအကွယ်ပေးထားခဲ့သည်။
Amendment II – A well regulated Militia, being necessary to the security ofafree State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
ရည်ရွယ်ရင်းမှာသေနတ်နှင့်အမဲလိုက်စားကြရန်မဟုတ်။ လက်နက်နှင်ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလာမည့် အစိုးရနှင့်စစ်တပ်ကို ပြန်လည်ခုခံရန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ သို့ဆိုသော် အမေရိကားသည် လက်နက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်လာခဲ့သလို လက်နက်ကြောင့်ပင်
အမေရိကပြည်တွင်သေနတ်ကြောင့် ၂၀၁၇ခုအတွင်း ၁၅၅၄၉ယောက်သေခဲ့သည်။
2nd Amendment ထုတ်ခဲ့သည့်ခုနှစ်၁၇၉၁ က သေနတ်တလက်မှကျည်ထွက်အားသည် တမိနစ်လျှင် တချက်(တတောင့်)သာရှိသည်။ ၂၁ရာစုယခုတွင်မူစွမ်းအားမြင့်သေနတ်တလက်မှ တမိနစ်ကျည် ၆၀၀+တောင့်ထုတ်ပေးနိုင်နေပြီ။
သေနတ်လက်နက်ကို Tool ကရိယာတန်ဆာပလာအဖြစ်သဘောထား လူထုအားကိုင်ခွင့်၊မွန်းမံခွင့်တီထွင်ခွင့်ပေးထားခြင်းကြောင့် နည်းပညာအရတိုးတက်လာသော ထင်ရှားသည့်ရလဒ်ပါတည်း။ သို့ဆိုသော် သေနတ်တလက်နှင့်
လူသတ်အသက်ခြွေနိုင်သော အရေအတွက်လည်း လွန်စွာတက်လာသည်။ စစ်ပွဲများလည်းစိတ်လာသည်။
သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက် ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၄တွင် ဆန်ဒီဟုခ် မူလတန်းကျောင်း၊ နယူးတောင်း၊ကန်နတိကက်ပြည်နယ်တွင်ကလေးများအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်သတ်ခဲ့သော အချိန်မှ ယခု ၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ရက်
ချစ်သူများနေ့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်။ ပါ့ခ်လန်းဒ်ရှိအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူားဆရာ၁၇ယောက်အသတ်ခံရချိန်အထိအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုပေါင်း ၁၆၀၇မှုဖြစ်ခဲ့ကာ လူ၁၈၄၆ယောက်သေ၍ ၆၄၅၉ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဆန်ဒီဟုဒ်မူလတန်းကလေးတို့ သေဆုံးခြင်းကြောင့်ကျခဲ့သော သမ္မတအိုဘားမား၏မျက်ရည်ကိုမီဒီယာတို့တွင်မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ အိုဘားမားသည်ကွန်ဂရက်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်သေနတ်ကိုင်ခြင်းအားအတိုင်းအတာတခုထိထိမ်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင် ။နည်းဥပဒေအနေဖြင့်ကား
နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်ပြန်စစ်ကာစိတ္တဇဝေဒနာသည်များအားသေနတ်ရောင်းချခြင်းကိုအတိုင်းအတာတခုထိပိတ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မတထရမ့်တက်လာသည်နှင့်ဦးစွာဖြုတ်ပစ်လိုက်သောနည်းဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များတွက် ထိုအချက်လည်းပါသွားပါလေသည်။ သမ္မတထရမ့်သည် NRA အမာခံ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာနားလည်သော်ငြား ပစ္စည်းမဲ့တို့ဒေါသကို သဘောမပေါက်သည့် ဘီလီယံနာဖြစ်သည်။
NRA vs American Teens
အမေရိကား၏ပါဝါအာဏာအကြီးဆုံး ၁၈၇၁ခုနှစ်ကတည်ထောင်သောအသင်းကြီးသည် သေနတ်ကိုင်သူ။သေနတ်ချစ်သူများ၏အသင်းကြီးဖြစ်ယုံမက နိုင်ငံရေးလောကတွင်လည်းလွန်စွာ အာဏာပါဝါရှိသော အသင်းကြီးဖြစ်၏။
အသင်းဝင် ၅သန်းရှိကာ အသင်းကြီးမှ အခြားနိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနှင့်အကျိုးစီးပွားချိပ်ဆက်ထားပြီးအသစ်တက်လာမည့်နိုင်ငံရေးသမားများ။ အဟောင်းမြဲစေမည့်အမတ်များအတွက်လည်းနိုင်ငံရေးရန်ပုံငွေသန်းရာချီလှူတန်းပေးကမ်းနေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အသင်းသည်
“သေနတ်ကိုင်လူဆိုးကို သေနတ်ကိုင်လူကောင်းကရပ်တန့်စေနိုင်သည်။” အမြင်ကိုကိုင်စွဲထားကာ အမေရိကန်တိုင်း၏သေနတ်ကိုလွတ်လပ်စွာကိုင်ခွင့်ပိုင်ခွင့်ကို မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ အထိမခံပေ။
ရှေးခေတ်နှင့် ယခုခေတ်အမေရိကပြည်ကို လက်နက်နှင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်မဟုတ်လော။ ခွင့်တူညီမျှအောင် လက်နက်နှင့်ညှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မဟာမိတ်နိုင်ငံများသို့လက်နက်စစ်ပစ္စည်းထိုင်ရောင်းကာ စစ်အတွင်းနောက်ကျဝင်လာပြီးနောက် ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလွှမ်းခြုံယူအုပ်စိုးသွားသော အမေရိကပြည်ထောင်စု၏ပါဝါအမြုတေသည် လက်နက်မဟုတ်ပါလော။
အသတ်ခံရသူတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေရင်းများနှင့် ကျောင်းသွားရင်း နောက်မလုံဘ၀ရောက်ကြရမည့်ကျောင်းသူားများအတွက်ကား ထိုသို့မဟုတ်။ သေနတ်သည် စိတ္တဇဝေဒနာသမား သို့မဟုတ် အကြောင်းမဲ့လူသတ်ချင်သူလက်ထဲ
မရောက်သင့်။ အစိုးရသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လူထုအသက်အိုးအိမ်ကိုတာဝန်ယူရမည်။
ယခုလပိုင်း အမေရိကနိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် ထိုထိုအခြေအနေတွင် ဘယ်-ညာလွန်ဆွဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
သေချာသည်မှာ မည်သည့်အမေရိကန်ကမှ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ရန်/ဖြုတ်ရန်စိတ်မ၀င်စား။ သို့သော် လက်နက်ကို ဘီယာ(ပင်)တရားဝင်မ၀ယ်နိုင်သေးသည့်အသက်၁၈နှစ်သားကအလွယ်ဝယ်နိုင်သောစနစ်ကိုမူကားအလိုမရှိ။ လက်နက်ဆိုသည်မှ
သာမန်လက်နက်လည်းမဟုတ်။ AR 15 သို့တစက္ကန့်လျှင် ကျည် ၇၀၀တောင့်ထိပစ်နိုင်သော စစ်ဖြစ်လျှင်သုံးသည်လက်နက်ကိုရူးသူဖြစ်စေအလွယ်ဝယ်နိုင်သည်ကို မလိုလားကြ။
NRA ဖက်မှကြည့်လျှင်တော့ တမျိုးဖြစ်မည်။ သေနတ်ထုတ်ခြင်း/ရောင်းခြင်းသည် NRA ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏အသက်သွေးကြော အလုံးစုံ၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့ကို ထိမ်းညှိပေးထားရာ”နတ်တပါး”ဖြစ်သည်။
ယခုတခါတွင် ဖလော်ရီဒါပြည် အထက်တန်းကျောင်း၌အသတ်ခံရသူများမှာ လူမမယ်ကလေးငယ်များမဟုတ်မူ၍ကောင်းစွာချေပပြောဆိုနိုင်သော မျက်မြင်သက်သော အထက်တန်းကျောင်းသားများဖြစ်ရကား သေနတ်ဥပဒေကို(အနည်းငယ်တော့)ကိုင်လှုပ်တော့မည်ထင်ပါသည်။ ဖလော်ရီဒါပစ်ခတ်မှုပြီးသည်နှင့်ပင် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ အိမ်ဖြူတော်အထိ ဘတ်စ်များနှင့်ချီတက်သွားကာ သမ္မတနှင့်တွေ့ရင်း သူတို့အလိုဆန္ဒတို့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ကြသည်။
ဆယ်ကျော်သက်တို့၏ ပါဝါသည်သေနတ်မှပေးထားသော အာဏာကိုယှဉ်နိုင်မည်လား စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဟူ၍သာ။
မြန်မာလူမျိုးတို့သည် သမိုင်းအဆက်ဆက် နှစ်ထောင်ချီ လက်နက်ကိုင် စစ်တိုက်ကျွမ်းကျင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်အတွင်းသုံး ဆင်၊မြင်းထိမ်းကျောင်းရာတွင်လည်းကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ရှေးအစဉ်အဆက်ဒေသတွင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်မူ၍
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်ကြသော် ရဲဘော်သုံးကျိတ်ဟူ၍ ဂျပန်သွားစစ်ပညာတော်သင်ကာ စစ်တပ်ထောင်သေနတ်ကိုင်ဂျပန်နှင့်ပေါင်း၍ အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်သည်။
ဂျပန်တို့နှင့်အဆင်မပြေဖြစ်သော် အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ခေါ်ကာ ချပြန်သည်။
သို့နှင့်ဂျပန်အထွက်အင်္ဂလိပ်ပြန်အ၀င်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်နှစ်များတွင်ပင် အင်္ဂလိပ်တို့ကိုလိုနီဘ၀မှအလိုလို လွတ်လပ်ရေးရကုန်သည့်နိုင်ငံများလည်းရှိပေရာ မြန်မာတို့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသည် လိုသည်လေလား/မလိုလား မည်သူမှသေချာလည်းမသိ။ သေချာသည်ကား ကိုင်ထား(ဖူး)သောလက်နက်တို့ကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်မီးကြီးတ၀ုန်းဝုန်းတောက်လောင်ခဲ့ခြင်းသာတည်း။
၂၁ရာစုရောက်ပါပြီ။ ယခုလည်း သူပုန်အသီးသီး၊ တိုင်းရင်းသားအပြားပြားက သေနတ်ကိုင်ထားကြပြန်လေသည်။
သေနတ်ကိုင်သူကိုသာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ခေါ်သည်ကိုး။ မြန်မာ့သမိုင်းတလျှာက် လက်နက်ကိုင်ထားသူအချင်းချင်း စားပွဲပေါ်ညှိခြင်းအဆင်ပြေခဲ့ဖူးပါ၏လော။ မိမိလည်းသေချာမသိ။
မြန်မာသည်ကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးသော တိုင်းပြည်ကြီး ၂ခုကြားရှိနေရကား မြန်မာတိုင်းလည်း သေနတ်ကိုင်နိုင်ပါရန်ဥပဒေပြုပါရန် စသင့်ပါပြီ။ နိုင်ငံသားတိုင်း အရွယ်ရောက်သည်နှင့်စစ်တပ်တွင်အမှုထမ်းသည်လည်းဖြစ်ရမည်။
အစိုးရသည်လည်းကောင်း၊ စစ်တပ်သည်လည်းကောင်း မတရားအနိုင်ကျင့်နေသည်တို့ရှိသည်။
လက်နက်ကိုင်သူပုန်တို့သည်လည်းကောင်းအကြမ်းဖက်သမားတို့သည်၎င်း အနိုင်ကျင့်ကြသည်ရှိ၏။ မြို့ကြီးလမ်းမပေါ်တွင်ပင်ဒါးတိုတချောင်းကိုင်ကာ တလောကလုံးအော်ဆဲနေသူများလည်းရှိသည်။
အမေရိကားကဲ့သို့ လူတိုင်းသေနတ်ကိုင်ခွင်ပြုထားပါလျှင် မည်သူကမျှမည်သူ့ကိုမှ အသားလွတ်မစော်ကားရဲပါလေ။
သေနတ်မကိုင်ထားစေဦး ရှိလေနိုးဖြင့် အပြန်အလှန်လေးစားသမှုထားကာ ထိမ်းကုန်သည်ကို ဂျပန်-အမေရိကားပြည်၏သမိုင်းတို့မှယူကြည့်နိုင်သည်။
ဂျပန်လူမျိုးတို့သည် တစုံတဦးအားတိုက်မိလျှင်ဖြစ်စေ။ အနှောက်အယှက်ပြုမိလျှင်ဖြစ်စေ ကဗျာကယာဦးစွာတောင်းပန်လေ့ရှိသည်။
ထိုဓလေ့သည် ဆာမူရိုင်းအခံစိတ်ဓာတ်မှလာသည်။ ရှေးဂျပန်တို့သည် လမ်းရှောင်ရင်း တဦးနှင့်တဦးထိတိုက်မိသော်(မြန်မာတို့ကဲ့သို့) တချက်လှည့်ကြည့်ကာ စောင်းငန်းစောင်းငန်းနှင့်ဆက်သွားပါလျှင် စိမ်ခေါ်သည်မူ၍
ကောင်းဘွိုင်အပါအ၀င် အမေရိကန်လူထုသည် မျက်စိတဆုံးရှိသောလယ်ယာ/မွေးမြူရေးများလုပ်ကြသည်။
တအိမ်နှင့်တအိမ်ဝေးလှသည်မို့ လက်နက်ရှိတစုံတဦးမှ အိမ်လာသောင်းကျန်းသွားလျှင် သေဖွယ်ရသာရှိတောသည်။ သို့နှင့်ကိုယ်တိုင်လုံခြုံမှုအတွက် သေနတ်ဆောင်ရသလို ကလေးငယ်မှအစ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ရန် သေနတ်ပစ်တတ်ရသည်။
ထိုစိတ်အခြေခံမှသည် မှားလျှင်တောင်းပန်၊ တောင်းပန်ပါကကျေအေး/မအေး ဖွင့်ပြောရသည့်စရိုက်လည်းဝင်လာသည်။
သေနတ်၏ပါဝါသည်အလွန်ကြီး၏။ သို့နှင့်သေစေသောနတ် သေနတ်ဟုများ အမည်ပေးထားသည်လားမသိ။
မျက်စိတဆုံး ဧရာမကျယ်ပြောသော လယ်ခင်းစိုက်ခင်းကြီးများ၏ အစွန်းထောင့်ရှိ ပြောင်းခင်းမှပြောင်းတဖူးကိုချိုးယူရန်ပင်မ၀ံ့ဖြစ်ချေသည်။ မတော် အဝေးတနေရာမှ ပိုင်ရှင်က စနိုက်ပါနှင့်ပစ်လျှင်မထိလော။ ထိလျှင်မသေလော။
လူမှုရေးရာများတွင် လွတ်ကွက်ဟာကွက်များလွန်းသည်။ ထိုယဉ်ကျေးမှုများကို “မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတရားဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။” ဟူသော စာလုံး၁၆လုံးမျှက ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်သည်။
လေကိုကန်၍မာန်နေရသောဘ၀များမှလည်း လွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ဤသို့နှင့်အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာ့မူလအခြေအနေရွှေထီးဆောင်းခေတ်လည်းပြန်ရောက်လာစရာအကြောင်းရှိပါသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံမဆို သူနှင့်တန်သောအစိုးရ (သို့) မည်သည့်အစိုးရမဆို သူနှင့်တန်သောလူထုရသည်မဟုတ်ပါလော။
ဘာသာတရား၊ တိုင်းရင်းသား၊ အဖွဲ့အစည်း။ အသင်းအဖွဲ့။ ။ ဆွေမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု၊ လူအချင်းချင်းတဦးတဖွဲ့တစုတနိုင်ငံအပြန်အလှန်လေးစားသမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို သေနတ်နှင့်လုပ်ယူသွားသည်ကိုမြင်လိုမိပါကြောင်း။
အမလေးဗျာ… ပြီးခဲ့တဲ့လက ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတရားဝင် လုပ်ခွင့်ဆိုပြီး မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်သွားတယ်။
ဒီလရောက်တော့ မြန်မာပြည်သူားတွေကို သေနတ် ကိုင်ခွင့် ပေးသင့်တယ်တဲ့။
မြန်မာပြည်ဆိုတာက သူကြီး ပြော ပြောနေတဲ့ ဂျပန်တို့ အမေရိကန်တို့ကလို လူတွေ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည် မဟုတ်။
ဘယ်တိုင်းပြည်နဲ့မှ မတူတဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေ/ အကျင့်စရိုက်တွေ/ သက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ပုံစံတွေက
မတူရေးချ မတူ။ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တာက… နွားသိုးတွေကို ကာမအားတိုးဆေး ကျွေးလိုက်မိသလို…
သေနတ် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပြုလိုက်တာက မြင်းကို ချိုတပ်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်တော့မှာပဲ။
ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုန်း။ ဒိုးခတွေ ရောက်ကုန်ပါ့မယ်။
သူကြီးမင်း အနေနဲ့ မြန်မာပြည် ပြန်လာပြီး ငါးနှစ်လောက် တောရော မြို့မှာပါ အခြေချပြီး…
အခု ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူားတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေ အပြုအမူတွေကို လေ့လာဖို့ လိုအုန်းမယ်။
လူကူးမျဉ်းကြားနားမှာ လမ်းကူးဖို့ လူတွေ ရပ်နေတာ မြင်လို့ အရှိန်လျှော့ပြီး ရပ်ပေးတဲ့ကားသမားကို
အနောက်နဲ့ ဘေးက တခြားကားသမားတွေက ငါနဲ့ ကိုင်တုတ်ပြီး စောက်သဘောတွေ စွတ်ကောင်းနေတယ် ဟပ်လား
လို့ ဆဲဆိုသွားတာမျိုး အမေရိကားမှာ ရှိလား။ မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်။ အဲ့ထက် ဆိုးတာတွေ တပုံကြီး။
အဲ့လောက် အသေးအဖွဲလေးကနေ အကြီးကြီးအထိ… ဖြစ်နေကြတာာမှ သေနတ်သား ပေးကိုင်လိုက်လို့ကတော့
အမေရိကားမှာထက် သေနတ်ကြောင့်လူသေနှုန်း တစ်လနဲ့တင် ပိုများသွားလိမ့်မယ်။
ကိုရင်အပါအ၀င်.. မြန်မာတွေကို.. ရှင်းပြ..ပြောစရာစကားကားမရှိ..။ အချိန်လည်းမရှိ..။ အခြေအနေလည်းမရှိ..။
အထူးသဖြင့်.. သခ်ျာမတတ်..။ လေးတန်းမအောင်.. သိပ္ပံနားမလည်သူတွေက.. စိတ်ဓာတ်ပိုင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရေးရာတွေမှာ.. မင်းမူနေတဲ့ ခေတ်ကာလမို့.. ဘာဘာ ဘာမှ မပြောလို..။
” မြန်မာတွေကို.. သေနတ်ပေးကိုင်ကြည့်လိုက်ပါလေ..။ လက်၅ချောင်းနဲ့ တခါ..၂ခါလောက်ကုန်တဲ့နှစ်တွေလောက်ဆို..စ,တက်လာဖို့လမ်းပေါ်ရောက်မယ်လို့..။ ” period !!!
A positive mind finds opportunity in everything.
A negative mind finds fault in everything.
crd : Buddha teaching and science.
နှစ်ပေါင်းများစွာ ယခု လက် ရှိအတိုင်း နေခဲ့ လေ ပြီ ..တိုးတက်မှု မရှီ ဆုတ်ယုတ်နေ၏ ။ ထို အတိုင်းဆက်နေမလား ပုံးထဲ ကထွက် ကြည့်ပြီး ပြောင်းကြည့်မလား။
ကောင်းသွားနိုင်သလို ပို လဲ ဆိုးနိုင်၏ ။ သေချာ တာက တော့လက်ရှိက ဆိုးနေ၏ ။ ပုံးထဲ ဆက်နေလို့ကတော့ မျှော်လင့်ချက်မရှိ။ ။
ကြည့်ရတာ.. မြန်မာတွေ သူတို့ကိုယ်သူတို့..” လူတွေ” မဟုတ်ဖူးလို့..ထင်နေတယ်နဲ့တူတယ်..။